August | 2014 | Burma Muslim
By burmamuslim on August 29, 2014 | Leaveacomment
အာကာထက် – ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁၀)၊ အမှတ် (၃၃)။
ကိုရီးယားမှအကူအညီယူကာ တည်ဆောက်မည့် လေအိတ်ရထား တည်ဆောက်မှုကုန်ကျငွေမှာ ခန့်မှန်းခြေ မြန်မာငွေ ၄၅ သန်းခန့်ရှိကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးက ပြောသည်။
ယင်းရထားတည်ဆောက်ပါက ကိုရီးယားမှ အကူ အညီရယူမည်ဖြစ်ကာ လေအိတ်ရထားများ တည်ဆောက် ပြီးပါက လမ်းထိခိုက်မှုနှင့် ရထားထိခိုက်မှုအား လျော့နည်း စေနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”ကိုရီးယားကနေ အကူအညီ အကုန်လုံးရယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်သလောက်ပဲယူမှာပါ။ ဘတ်ဂျက် ပေါ် မူတည်နေတဲ့အတွက်လဲ စဉ်းစားရပါတယ်”ဟု ဝန် ကြီးက ပြောသည်။
ယင်းလေအိတ်ရထား တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ရထားတွဲအစိတ်အပိုင်းကိုသာ ပြည်ပမှရယူမည်ဖြစ်ပြီး ကျန် ရှိသည့် ကိစ္စများအား ပြည်တွင်း၌သာ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကိုရီးယားကနေ ရထားတွဲအစိတ်အပိုင်းတွေပဲယူ မှာပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းတွေ၊ ပြင်ဆင်ခြင်းတွေ အားလုံးကို ပြည်တွင်းမှာပဲ တပ်ဆင်သွားမှာပါ” ဟု ရထားသွားလာရေး၊ တိုင်းအမှတ်(၇)မှ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဇော်ဖေစိန် ကပြောသည်။
ယင်းတည်ဆောက်မည့်ရထားသည် အောက်ခံ Spring များအား လေအိတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် လေအိတ်ရထား ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”လေအိတ်ရထားဆိုတဲ့အတိုင်း လေအိတ်ပါပါတယ်။ အောက်ခံ Spring တွေက လေအိတ်နဲ့ဆိုတော့ ရထား ခုန်တာတွေ၊ ယိမ်းတာတွေ သိပ်မဖြစ်တော့မှာဖြစ်သလို စီးရတာလဲ ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိလာပါလိမ့်မယ်” ဟု ယင်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဗဟိုအာဖရိကတွင်စစ်သွေးကြွခရစ်ယာန်များကြောင့် သောင်းနှင့် ချီသော မွတ်စ် လင်မ် များ ထွက် ပြေး နေ ရ
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံတွင် လူမှုအဆောက်အဦကို တစ်စစီဖဲ့ခြွေနေသည့် စစ်သွေးကြွခရစ်ယာန်တို့၏ ကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သောင်းနှင့်ချီသော မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ များသို့ လေယာဉ်များနှင့် လည်းကောင်း၊ ထရပ်ကားများဖြင့်လည်းကောင်း အလွတ်ရုန်းထွက်ပြေးလျက်ရှိသည်။
မျက်မြင်သက်သေများ၊ ကူညီရေးအေဂျင်စီများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းသူများ၏ အဆိုအရ လတ်တလောရက်ပိုင်းအတွင်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် သောင်းကျန်းသူ တို့သည် မြို့ငယ်များ၊ ရွာများသာမက မြို့တော်၌ပင် ဓားရှည်များဝှေ့ရမ်းလျက် မွတ်စ်လင်မ် အမြောက်အများတို့ကို သတ်ဖြတ်၍ ၎င်းတို့၏နေအိမ်နှင့် ၀တ်ကျောင်းတော်များအား မီးတင်ရှို့ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း များ ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုအာဖရိကတွင် မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် လူနည်းစုဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
မကြာသေးမီက Saharan Africa အစွန်အဖျားတွင် ဖြစ်ပွားသော မွတ်စ်လင်မ်-ခရစ်ယာန် ပဋိပက္ခများ၏ဂယက်သည် အဆိုးဝါးဆုံး အကြမ်းဖက်မှုတစ်ရပ် အသွင် မြန်ဆန်စွာ ဖြစ်ပွား လျက်ရှိ သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံများကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တင်းမာမှုများ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင် မိုက်ကယ် ဂျိုတိုဒီးယား Michel Djotodia ဖြုတ်ချခံရပြီး လွန်ခဲ့သည့်လ နယ်နှင့် ခံရချိန်မှစတင်၍ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်မှုများ အဆင့်ဆင့် မြင့် တက် လာသည်။ ဂျိုတိုဒီယာသည် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ရန် ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တို့၏ ဖိအားပေးမှုကို ခံခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့သော မတ်လတွင် အာဏာသိမ်းမှု ခံလိုက်ရသည်။ ဤဆင်းရဲနုံ ချာသော နိုင်ငံငယ်၏ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် သူက ရည်ရွယ် ထွက်ခွာပေးခဲ့သော်လည်း အာဏာာသိမ်းပြီးချိန်ကထက် အကြမ်းဖက်မှုများ အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု လူသားချင်းစာနာ ကူညီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းလုပ်သားတို့က ဆိုကြသည်။
“ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့အသက်ဘေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့ အလွတ်ရုန်းထွက်ပြေးနေကြတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို မတွေးဝံ့ စရာကောင်းလောက်တဲ့ အဆင့်အထိ အလွန်အကျွံ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်” ဟု နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များအဖွဲ့၏ အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ ကူညီရေး အစီအစဉ်မှူး Martine Flokstra မှ သောကြာနေ့ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သောကြာနေ့က ချာ့ဒ် Chad နိုင်ငံမှ စစ်သားများခြံရံ၍ မွတ်စ်လင်မ် ထောင်ပေါင်း များစွာတို့သည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုပ်ပိုး တင်ဆောင်ထားသည့် ထရပ်ကားများဖြင့် ဘန်ကွေး မြို့ပြင် သို့ မောင်းထွက်သွားကြရာ ခရစ်ယာန်များက ယင်းထွက်ခွာမှု အပေါ် ၀မ်းသာအားရ ကြွေးကြော်ကြ၏။ ခရစ်ယာန် နယ်မြေများသို့ဖြတ်သန်းရာတွင် လုယက်ရန်ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြသည်။ ထရပ်ကားပေါ် မှ ပြုတ်ကျသည့် အနည်းဆုံး မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ လူအုပ်ကြီး၏ သတ်ဖြတ်မှုကို ခံရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထောင် ဂဏန်းမက မွတ်စ်လင်မ်တို့ သည် လေဆိပ် ၌ ဘေးကင်း စွာ ထွက်ခွာနိုင်ရေး အတွက် စုဝေးတိုးကြိတ်လျက် ရှိကြသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဇနီးသည်၊ ကလေးငယ် ၅ဦးနှင့်အတူ အနောက်ပိုင်း ယာလုခ်မြို့မှ လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာသော မုဟမ္မဒ် ဆွာလိဟ် ယဟ်ယာ (၃၈)နှစ်က “သူတို့ဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ဓားတွေနဲ့ သတ်ဖြတ်နေကြပါတယ်” ဟု လည်လှီးသည့်ပုံစံလုပ်ပြရင်း ပြောဆိုသည်။
“ ၂ နှစ်ကျော်ကြာအောင် ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကို ခရစ်ယာန်တွေက မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် စွန့်ခွာထွက် သွားချင်နေပါပြီ”။
ဤရှုပ်ထွေးပွေလီသော အပြန်အလှန် ပဋိပက္ခအတွင်း မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ပစ်မှတ်ထားခံရသည့် အကြမ်းဖက် ဓားစာခံ ခရစ်ယာန်များလည်း ရှိကြရာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားရေး တာဝန်ရှိသူများက မျိုးသုဉ်းရှင်းလင်းမှု အသွင်ဆောင်သွားမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြသည်။ အိမ်ပြန်ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေသော သို့မဟုတ် အိမ်မပြန်နိုင်သော ခရစ်ယာန်တို့မှာလည်း ညစ်ထေးလှသည့် စခန်းများတွင် တအုံတကျင်း ကျန်ရှိနေသည်။ သို့သော် မွတ်စ်လင်မ်တို့အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများက မပြောင်းမလဲ ပြင်းထန်နေဆဲဟု ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများက ဆိုသည်။
ဂျိုတိုဒီးယား၏ ထွက်ခွာမှုသည် Seleka ဟု ထင်ရှားသော မွတ်စ်လင်မ် သူပုန်အဖွဲ့ဟောင်းကို အင်အားချည့်နဲ့သွားစေခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့မှ မတ်လတွင် အာဏာချုပ် ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် ခရစ်ယာန်များကို ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ anti-balaka မည်သော ခရစ်ယာန် စစ်သွေးကြွများကို မွေးဖွားပေးလိုက်လေသည်။ ၎င်း လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူများက မွတ်စ်လင်မ် တို့အား စော်ကားတိုက်ခိုက်မှု အရှိန်မြင့်ရန် အာဏာ လစ်လပ်နေခြင်းကို အသုံးချလိုက်ကြသည်။
လက်ရှိတွင် ဖရိုဖရဲအနေအထားရောက်နေသော Seleka အဖွဲ့သည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား ယင်းအကြမ်းဖက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း အလျဉ်းမရှိတော့။ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော အင်အား ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်ရှိ ပြင်သစ်နှင့် အာဖရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း အကြမ်းဖက်မှုကို ရပ်တန့်အောင် မတားဆီးနိုင်သေးချေ။
အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသနှင့် ဘန်ကွေး၌ လူနည်းစုမွတ်စ်လင်မ်တို့အား တိုက်ရိုက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်။ Anti-Balaka အုပ်စုဝင်များ၏ ၀ိုင်းရံမှုခံရသော မိမိတို့ကျေးရွာများ အတွင်း ပိတ်မိနေသည့် မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ကံကြမ္မာမှာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေသည်။ မွတ်စ်လင်မ် မိသားစု များစွာတို့မှာလည်း အဓမ္မ နယ်နှင်ခံနေရ၏။
နယ်မြေရွှေ့ပြောင်းမှုရေးရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ IOM – International Organization for Migration ၏ အဆိုအရ ခရစ်ယာန်စစ်သွေးကြွများနှင့် ယခင်အစိုးရဟောင်း၏ စစ်သားများ ပြန်လည်ခေါင်းထောင် လာပြီး အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားသော ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်ကတည်းက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသူပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဂျိုတိုဒီးယား နှုတ်ထွက်ပြီးနောက် ထွက်ခွာသူဦးရေ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အများစုမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိကြသည့် ချာ့ဒ်၊ ကင်းမရွန်း၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ နိဂါးနှင့် ဆူဒန် နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးကြသည်ဟု IOM ၏ စာရင်းများက ဖော်ပြနေသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် နိုင်ငံသားများ သာမက ပြည်ပလုပ်သားများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ထွက်ပြေးကြသူများအနက် ငါးသောင်းခန့်သည် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းဝင် မွတ်စ်လင်မ် တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သော ချာ့ဒ်သို့ ဦးတည် ထွက်ခွာသွားကြသည်။
“ လူငါးသောင်းဆိုတာ မြို့ငယ်တစ်မြို့စာ ရှိပါတယ်။ ဒါက လမ်းခရီးတစ်ဝက်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ အခြေအနေ မတိုးတက်မကောင်းမွန်ဘူးဆိုရင် ဒီထက် ပိုတိုးလာဖို့သာ ရှိပါတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တွေ ထွက်ခွာမှုကြောင့် ဗဟို အာဖရိကနိုင်ငံအဖို့ စီးပွားရေးနစ်နာမှု နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မွတ်စ်လင်မ် အများစုဟာ အခြေခံ လူသုံးကုန်တင်သွင်းတဲ့ ကုန်သည်တွေ၊ အရောင်းသမားတွေဖြစ်သလို အသားစက်ရုံတွေကိုလည်း လည်ပတ်နေ သူတွေ ဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်လာပြီး မြို့တော်ထဲမှာပင်လျှင် အမဲသားကို အသည်းအသန် ရှာဖွေနေရပါပြီ။ လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံး အကြီးအကျယ် နစ်နာဖို့ ရှိနေပါတယ် ” ဟု IOM ၏ အရေးပေါ် အစီအစဉ်မှူး ဂျော်ဗန်နီ ကက်စာနီ Giovanni Cassani မှ ဆိုသည်။
မြို့တော် ဘန်ကွေး၌ ချာ့ဒ်အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့် Seleka သူပုန်ဟောင်းတို့မှ ချာ့ဒ်နယ်စပ်သို့ ထွက်ခွာသည့် မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ထရပ်ကားတန်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး ခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်နှင့် အာဖရိကန် စစ်သည်တို့မှာလည်း လုယက်သူများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမှုများရှိရာ ထရပ်ကားအချို့ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထရပ်ကားပေါ်မှ ကျကျန်ခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ လက်များ၊ မတော်တရော်များကို လူရမ်းကားအုပ်စုမှ အမဲဖျက်သလို ဖြတ်တောက်သတ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်ခန့်ကပင် အကောင်း ပကတိရှိနေသော မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ရပ်ဝန်းများမှာ Anti-Balaka အဖွဲ့လက်ချက်ဖြင့် ၀တ်ကျောင်းများ၊ အိမ်ခြေများ ရစရာမရှိအောင် ပျက်စီးသွားကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ် တစ်သောင်းခန့်ရှိခဲ့သော ဘော့ဆန်ဂိုအာမြို့တွင် ယခုအခါ ရာဂဏန်းမျှသာ ကျန်ရစ်တော့ကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်များ တစ်ဦးမကျန် ထွက်ခွာသွားသော ဒေသများမှအပ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့၏ အရေးပေါ်ကိစ္စများဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Peter Bouckaert မှပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်တွင် လေဆိပ်သို့ရောက်လာပြီး ထွက်ခွာရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မုဟမ္မဒ် အဗ်ဒိရဟ်မာန်း (၆၂)နှစ်က မိမိ၏ရွာ ဂျဘ၀ီမှာ Anti-Balaka တို့ လက်ချက်ဖြင့် မီးလောင်ပြင်ဖြစ် ခဲ့ပြီး လူအားလုံးနီးပါး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရကြောင်း၊ စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု မဖြစ်ပွားမှီ မိမိ၊ ဇနီသည်နှင့် သားသမီး (၁၂)တို့ ထွက်ခွာလာကြသဖြင့် ကံကောင်းထောက်မစွာ သေဘေးမှ လွတ်လာကြောင်း၊ ဆက်လက်နေထိုင်ပါက မိမိနှင့် မိသားစုကို ခရစ်ယာန်များမှာ ရသည့်နည်းဖြင့် (နှုတ်ပိတ်) သတ်ဖြတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
Ref : Washington Post
Web => http://www.m-mediagroup.com/news/31215
Blog => http://mmedianews.blogspot.com/2014/08/blog-post_817.html
တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို နလပိန်းတုံး ထင်နေလား . . .
By burmamuslim on August 26, 2014 | Leaveacomment
ဩဂုတ် ၂ဝ ရက်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ Affordable Housing Project လုပ်တဲ့အခါ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကိုသာ ဦးစားပေးမနေဘဲ တောင်ကြီး၊ မော်လမြိုင်၊ ပုသိမ်၊ တောင်ငူ၊ မုံရွာ၊ မကွေး၊ စစ်တွေစတဲ့ မြို့တွေမှာပါ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေသူတွေ နေထိုင်နိုင်အောင် သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ Public Housing Project တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တ၀ုန်းဝုန်းနှင့် မိုးရွာနေ၏…
ညနေ (၆နာရီ ၄၀) ဟိုတယ်တွင်းသို့ အနက်ရောင် ကားတစ်စီး အရိန်နှင့် မောင်းဝင်လာသည်။
သို့သော် ဟိုတယ်၏ (၃)ထပ်မြောက် စူပါဖန်စီ ( Super Fancy ) ဟုခေါ်သော ရေအေး ရေနွေး ချိုးခန်းအပြင် ၄၈ လက်္မ ဖန်သားပြင်ပြားပြားနက်နက်တီဗွီ နှစ်လုံးနှင့် အင်တာနက် အပါဝင် ဆာရောင်းဆောင်း တပ်ဆင်ထားသော အခန်းအမှတ် (၁၆) အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေကြသော သူများ ကျန်နေခဲ့သည့်အပြင် အထူးစူပါ ခန်းများအား လိုက်လံ၍ အစားသောက်ထည့်ပေးနေရသော ဆားဗစ် များလည်း ရောက်မလာသေး၍ ဟိုတယ်မန်နေဂျာကြီး အတော်ကြီးကိုပင် ဒေါပွကာ လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် သူ၏ ခေါင်းကို ကြမ်းကြမ်းကြီးပင် ကုတ်လေသည်။
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများအားလုံး နားနေခန်းမှ ကျန်နေသူများအားစောင့်နေကြရင် တီးတီးတွတ်တွတ်ပြောကြလေသည်မှာ “တခုခုတော့ တခုခုပဲ…ဒီလောက် အသဲသန်ဖြစ်နေတာဆိုရင် လူကြီး တယောက် ယောက်က အတိုမလေးနဲ့ လာတည်းမယ့်ပုံတော့ ရှိတယ်” ဟုပင်ဖြစ်သည်။
သိပ်မကြာ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လောက်မျှကြာသောအခါ ဟိုတယ်မန်နေဂျာမှ ဒီနေ့တော့လူလဲ ကောင်းကောင်းမစုံဘူး ခေါ်လိုက်ရင် ဒီအတိုင်းပဲ ဟိုလူ့ကို စောင့် သည်လူ့ကိုစောင့်နေရတာနဲ့ ပြောစရာတွေ မပြောဖြစ်တာက များခဲ့ပြီး မနက်ဖြန်မှ အားလုံးကို ဟိုတယ်အရေးပေါ် စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောတော့မယ် ဟုဆိုကာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သွားလုပ်ကြဆိုသဖြင့် နားနေခန်းမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြရသည်။
ညသန်းခေါင်ကျော် (၂)နာရီလောက်တွင် အခန်း(၁၆)မှ (ခြောက်သိန်း) တန်သော သြစတေးလျှဝိုင်အရက်အား အထူးမှာလာသည်။ ဒေါ်လာနှင့် ဆိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (ခြောက်ရာကျော် ခုနှစ်ရာ)နီးပါးလောက် ဖြစ်မည်ထင်သည် ။
နှစ်ယောက်လုံးရီဝေနေကြသည်။ တွန်းတိုက်ပွတ်သတ်နေသည်။ အချစ်မှာ မျက်စေ့မရှိဟု ကြားဘူးသော်ငြား ယခု အရှက်ပါမရှိ ဖြစ်နေသည်။ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းတချို့လဲ ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းဖြစ်ရသဖြင့် သွက်သွက်ကလေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကာ ပြန်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကမည်မျှ တည်းခိုပြီး မည်သို့ ဂဂျီဂဂျောင်ကျမည်ကိုတော့ ရင်ထိပ်ထိပ်ဖြင့် ဟိုတယ်မန်နေဂျာကြီးကိုယ်တိုင်ပင် ကြောင်းကျနေပုံပင်ရသည်။
ထိုနေ့ မိုးလင်းသွားသည်..၀န်ထမ်းများ အချိန်လဲလှယ်၍ပြန်ကြသည်.. သို့သော်အခန်း(၁၆) သတင်းကိုတော့ နေခင်း ၀န်ထမ်းများအား ညဆိုင်း ၀န်ထမ်းများအချို့က ဖေါက်သယ်ဈေးနှင့် ရသေလာက် မှီသလောက် ရောင်းခဲ့ကြသည်။ နေခင်း ၀န်ထမ်းများ အဆိုရ အခန်း(၁၆)မှ အဖိုးကြီးမြေးနှင့် မော်ဒယ်မတို့ မျက်မှန်နက်များဖြင့် ကတိုက်ကရိုက်ဆင်းလာပြီး နေခင်း (၁၁)နာ၇ီတွင် အမေ၇ိကန်ထုတ်ဇိမ်ခံ လင်းကွန်း နဗီဂေတာ (Lincoln Navigator) ကားအမျိုးစားဖြင့် ပြန်ထွက်သွားကြသည်။
ဟိုတယ်သန့်ရှင်းရေးသမားများ အခန်း(၁၆)သို့ သွားရောက်၍ ရှင်းလင်းရသည်။
အစ္စလာမ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ကြောက်စရာ ကောင်းသော ဘာသာတရား (သို့) သာသနာတခုလား
By burmamuslim on August 25, 2014 | Leaveacomment
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ကြောက်စရာကောင်းသူတွေ ဖြစ်လာနေပြီလား …။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ဆိုရင် … ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ ကျမ်းစာတွေ အဆုံးအမတွေ တရားတော်တွေကို အရင်လေ့လာကြရပါမယ် …။
အစ္စလာမ့်သမိုင်း နဲ့ ဒီကနေ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အစွန်းရောက်များကို လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ရင်းမြစ် ဆုံးမစကားတွေ သြ၀ါဒတော်တွေမှာ လူသားတို့ ကြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက် တခုတလေမှ မပါဝင်ပါဘူး …။ လူသားဆန်ပြီး အင်မတန် ရိုးရှင်းသလို … လူသားကောင်းကျိုးကို အထူးပြု လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချက်များသာလျှင် ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် …။
ဥပမာ အနည်းငယ်ကို ထုတ်နုတ်တင်ပြပါရစေ …။
သီလပိုင်းမှာ အစ္စလာမ်ဟာ တင်းကြပ်လွန်းတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင်ပဲ စောင့်ထိန်းခိုင်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကောင်း တယောက်ဟာ အမြဲအားဖြင့်စိတ်နှလုံးသား ဖြောင့်မတ်တည်ကြည် သန့်စင်နေဖို့ လိုပါတယ် …။
သူတပါး မကောင်းလုပ်ဖို့မဆိုထားနဲ့ … စိတ်နဲ့ပင် မပြစ်မှားရပါ … ပြစ်မှားမိပါက အပြစ်ရောက်စေပါတယ် …။
စိတ်နှလုံးသား ဖြူစင်သန့်ရှင်းနေလျှက် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်သို့ နေ့စဉ် တနေ့ ငါးကြိမ်ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတော်တင် ၀တ်ပြုဆုတောင်းကြရပါတယ် …။ ဒါဟာ ဆိုရင် လူသားတို့မကောင်းမှုကို တွေးတောချိန်ပင် မရလောက်အောင် ကာလအပိုင်းအခြား ကန့်သတ်၍ ဖော်ဆောင်ထားသော ဆုံးမသွန်သင်ချက် တခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကရုဏာတရားထားရှိဖို့အတွက် အဆိုအမိန့်တခု ရှိပါတယ် ။
“ အို – အာအေရှာဟ် ၊ အသင်မသည်မိမိတံခါးမှမည်သည့်ဆင်းရဲသားတဦးတယောက်ကိုမျှ ( ဘာသာကိုးကွယ်မှု မခွဲခြားရ )၊ တစုံတရာ မပေးကမ်းဘဲ မလွှတ်ပါနှင့်။ စွန်ပလွံသီးတခြမ်းပင်ဖြစ်စေ၊ ပေးကမ်းလိုက်ပါ၊ ဆင်းရဲသားတို့ကို ချစ်ခင်သနားပါ၊” ဟု တမန်တော်မြတ်က ၎င်း၏ ဇနီးအား ဆုံးမ သွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ၊ သနားကြင်နာစိတ်ကို အမြဲထားဖို့ ဆုံးမသွန်သင်ထားပါတယ်။
မေတ္တာတရားနှင့် ပတ်သက်၍ …
“ ငါသည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတို့အား ကျိန်ဆဲရန် စေလွှတ်တော်မူခြင်း ခံခဲ့ရသည် မဟုတ်ပေ။ မေတ္တာပွားရန် စေလွှတ်တော်မူခြင်း ခံရသော တမန်တော်သာ ဖြစ်သည်။ ” ဒါကလည်းတမန်တော်ရဲ့ မိန့်ဆိုချက်တခွန်းပါ …။
ရန်သူကိုပင် အပြစ်မယူဘဲ ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည် အပြင် ဆုမွန်ကောင်းပါ တောင်းပေးနိုင်သောတမန်တော် ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ် များစွာ တင်ပြရမည် ဖြစ်၍ စာသိပ်ရှည်မည်စိုးရိမ်ပါတယ် … ဒါကြောင့် လေ့လာကြည့်ဖို့ကိုသာ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် …။
ပြောလိုတာက အစ္စလာမ်ဟာ သီလ၊ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာ ကို အခြေခံပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ … တိရစ္ဆာန်တွေကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိပါဘူး …။ ဒီနေရာမှာ ထောက်ပြနိုင်တာကနွားတွေကို လည်လှီးသတ်နေတာ ဘာလဲ ဆိုတာပေါ့ ….။
ဒါကလည်း သမိုင်းကြောင်း အရပြောရရင် သိပ်ရှည်ပါတယ် …။ အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် စွန့်လှူခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သာသနာအတွက်ဆိုရင် အသက်ကိုပင် စွန့်လှူနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်စား အဲဒီ ဖန်ဆင်းခံ သတ္တ၀ါကိုဘုရားသခင်ဆီမှာ စွန့်လှူလိုက်တဲ့သဘောပါ ။ ဒီနေရာမှာ စွန့်လှူလိုက်တယ် ဆိုလို့ အဲဒီ သတ္တ၀ါရဲ့အသွေးအသားကို ဘုရားသခင် ရတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဖန်ဆင်းခံ သတ္တ၀ါကို ဖန်ဆင်းသူထံ ပြန်အပ်ခြင်း မျိုးပါပဲ ။
အဲဒီမှာ တိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ သတ်လို့ရသလား ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ ( အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်ရင် ) သတ်လို့ရပါတယ်။ ( ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းတော့ လုံးဝမပြုရပါ ) ဒါကြောင့်လဲ အလျင်အမြန် အသက်ထွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လည်ပင်း သွေးကြောကိုဖြတ်တောက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်က အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အတွက် သွေးဆိုတာအညစ်အကြေးပါ။ ဒါကြောင့် သတ္တ၀ါရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးစင်အောင် သွေးကြော မကြီးကို ဖြတ်တောက် ကြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။ အသားစားဖို့ လိုအပ်ရင် သတ်လို့ရပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းကော သတ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား ။ သူသတ်ကိုယ်သတ်ပဲကွာပါတယ် …။ တခုက အစ္စလာမ်မှာ အလိုအလျောက်သေတဲ့ အသားကို မစားဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ ရောဂါကြောင့်သေသလား ဘာလား မသိတဲ့ တိရစ္ဆာန်ရဲ့ အသားကို မစားစေခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်ရင်လည်း သိပ်မှန်ပါတယ်။ နောက်တချက် အန္တရာယ်ပြု လာမယ်ဆိုရင် သတ်လို့ရပါတယ်။ မြွေဆိုးကို ကျားရဲကိုမေတ္တာထားပါ ( အဖန်ဆင်းခံတွေမို့ ) သို့သော် ရန်မူလာမယ် အသက်ချင်းလုရမယ် ဆိုရင် အရင်သတ်ရပါမယ် …။ ခုပြောနေတာတွေက အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ ခုခံစစ် သဘောထားတွေပါ ။
အစ္စလာမ်သာသနာဟာ သမိုင်းကြောင်းအရ အလွန်ပဲ ဖြောင့်မတ် မျှတခဲ့ပါတယ် …။ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ တမန်တော် ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အခါ … အဲဒီခေတ်က ရဟူဒီ ဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုကို များစွာ တွန်းလှန်ကျော်လွှားခဲ့ရပါတယ် …။
စစ်ပွဲတွေ ဆင်နွဲရခြင်း မှန်သမျှ တို့ဟာ ခုခံစစ်များသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစ္စလာမ်တရားမှာကိုက ခုခံတိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိသည်။ ကျူးကျော် စော်ကားခွင့်မရှိ ဆိုတဲ့ မိန့်ဆိုချက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျူးကျော်ခြင်းတွေ မရှိဘူးလား ဆိုတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံကို ပျံ့နှံ့လာတဲ့အခါ အလေ့အထအရ ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်တာမျိုးပါပဲ …။ သူတို့တွေဟာ အစ္စလာမ့်အဆိုအမိန့်နဲ့တရားကို မသိသူတွေလို ဆိုရမှာပါ ။
ဒါကြောင့် အစ္စလာမ်စစ်တပ်ကြီးက ပါလနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ပါတယ် ဆိုတာမျိုးဟာ ပဒေသရာဇ် နိုင်ငံငယ်တွေ ၊ ကိုလိုနီပြုကြတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စပါ ။ အတင်းအကျပ် သာသနာပြုခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားကိုတော့ ရှာမတွေ့ပါ။ လူတို့မှန်းဆ ရေးသားခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ် …။ မြန်မာကိုယ်တိုင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပဒေသရာဇ် နိုင်ငံငယ်လေးတွေကို တိုက်ခိုက် သိမ်းယူခဲ့တာပါပဲ …။ ဒီကနေ့အထိ မြန်မာပြည်က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ အရာရာမှာ ဖိနှိပ်ခံနေရတာဟာလည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အမှန်တရားတခုပါပဲ ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနဲ့ ရာထူးတက်မပေးတော့တာ၊ စစ်တပ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ရာထူးကြီးမပေးတော့တာတွေ အားလုံးသိမြင်နေရပါတယ် …။ အင်္ဂလန် ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးကိုတောင် ပတ်သိမ်းခဲ့သေးတာပဲ မဟုတ်လား ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်တွေဟာ အင်မတန် လစ်ဘရယ် ဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အတင်းအကျပ်သဘောနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ရိုးရှင်းစွာ သာသနာပြုခဲ့ကြတဲ့ အတွက် တိုင်းရင်းသားများစွာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ….။
အစ္စလာမ်ဟာ သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဓားမိုးပြီး သာသနာပြုခဲ့ပါတယ် ဆိုရင် … ဒီနေ့ခေတ်မှာ အဲသလို မမှန်မကန်တဲ့သာသနာတခုဟာ ရုတ်ချည်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်များပြားလာစရာ မရှိသလို တည်မြဲ နေနိုင်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး … ပြန်လည်သုံးသပ်စေချင်တယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လူ ဆိုတာ ဖိနှိပ်ကွပ်ညှပ်မှု မှန်သမျှကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုတဲ့ အမျိုးမို့ပါ။
နောက်တချက်က လက်ရှိခေတ် အစ္စလာမ် သာသနာကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတချို့မကောင်းတာ ရှိနိုင်ပါတယ် …။ ဒါဟာလည်း သဘာဝပါပဲ ။ လူတိုင်း ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမကို တသွေမတိမ်းသာ လိုက်နာခဲ့ကြရင် ဒီနေ့ စစ်ပွဲတွေလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အင်မတန် သာတောင့်သာယာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး ဖြစ်နေမှာပါ ။ အဓိက ပြောချင်တာက သာသနာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လူတွေကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို သာသနာအပေါ်အမြင်မမှားစေချင်လို့ ရှင်းပြနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ….
အီရတ်ကိစ္စလို IS ကို မွတ်စလင်နိုင်ငံများ နဲ့ မွတ်စလင်အများစု လုံးဝ ထောက်ခံအားပေးခြင်းမရှိပါ။ ဆော်ဒီဘုရင်ဆိုရင် ကြေငြာချက်တောင် ထုတ်ပြီးပါပြီ ….။ အာဖရိကလို ကိစ္စမျိုးဟာလည်း အဖြစ်အပျက်များစွာထဲက တခုပါ …။ တကမ္ဘာလုံး အဲသလို ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောရင် ဒါဟာ မှားယွင်းနေပါတယ် …။ အစွန်းရောက်ကို အစွန်းရောက်လို့သာ မြင်သင့်ပါတယ် …။ လက်ရှိ ကာတာ၊ ကူဝိတ်နဲ့ ဆော်ဒီ လို နိုင်ငံမျိုးတွေကို အလုပ်သွားလုပ်နေသူတွေ ပိုသိနိုင်ပါတယ်။ အတင်းအဓမ္မ သာသနာ သွတ်သွင်းခြင်း ရှိမရှိပေါ့ …။
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ မွတ်စလင်နိုင်ငံတချို့မှ လွဲလို့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ လူနည်းစုမွတ်စလင်မ်တွေဟာ အဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရ၊ ပညာရေးအရ အစစမှာ ဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေ ရှိနေပါတယ် …။ ဒီလိုတွန်းအားပေးတဲ့ အချက်တွေကြောင့်လည်း အစ္စလာမ်တွေ ပြည်နယ်ခွဲထွက်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် အစ္စလာမ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်မှ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဗျတ်ဝိ ၊ ဗျတ္တ ခေတ်က စလို့ မြန်မာ့ရေမြေ ထိတွေ့ခဲ့ကြတာ ၊ နောက် ပါရှန်း ကုန်သည်တွေ ကသည်းတွေ ကမန်တွေ အများကြီးပါ ။ မြန်မာ ဘုရင်တိုင်းရဲ့ အားကိုးအားထား ကိုယ်ရံတော်တွေ၊ စာတော်ဖတ်တွေ၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်တွေ အဖြစ်အထိ သစ္စာရှိစွာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ကြသူတွေပါ ။ ဒါကြောင့် မြန်မာဘုရင် အဆက်ဆက် ချီးမြှင့် မြောက်စားခဲ့တဲ့ သမိုင်းအဖြစ် ဆောက်လုပ်ပေးထားခဲ့တဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်း ဒီကနေ့ ဘာပြသနာမှ မပေါ်ဘဲ အေးတူပူအမျှ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။
မူဂျာဟစ် သူပုန်တခုတည်းကိုဟိုက်လိုက် လုပ်လို့ မရပါဘူး …။ အဲဒီ အချိန် မူဂျာဟစ်သူပုန်ဘက်က တပြည်လုံး မွတ်စလင်မ်တွေမပါဝင်ခဲ့ဘူး ဆိုတာလည်း သေချာတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် …။ လက်ရှိ နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်ပေါက် မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ဆောင်နေသူတွေလား အကြမ်းဖက်ခံတွေလား ဆိုတာကိုလည်း သုံးသပ်ကြည့်ပေးပါ ….။
အစ္စလာမ့် မီဒီယာတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပုံရိပ်ကျဆင်းခြင်း ဆိုတာတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မြန်မာပြည်သူအများစု သိထားကြပါတယ်။ နောက်တခု ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂလီပဲ ခေါ်ခေါ် ၊ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ရွာဟောင်းစား လို့ပဲ ခေါ်ခေါ် ( ဘဘဦးတင်ဦး၏ အဆို ) တွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့ပြီး ပြသနာရှာနေပါတယ် ဆိုတာကတော့ အမှန်တရားနဲ့အတော် ဝေးကွာလှပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ သက်သေတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။
မုဒိမ်းမှုတမှုလောက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု တခုလောက်ကို တပြည်လုံးစာ ပြောလို့ မရပါ။ လူသားဖြစ်တဲ့ အတွက် အကောင်းရှိသလို အဆိုးလည်း အနည်းအကျဉ်း ရှိနေတာပါ။ တကယ်တမ်း စစ်တမ်းကောက်ယူရင်လည်း ပြစ်မှုမြောက်များစွာထဲမှာ အင်မတန်နည်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိရင် ဒါကလည်း ပြီးသွားမယ့် ကိစ္စပါ။ နောက်တချက်က ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ အစွန်းရောက်တွေကို မကြိုက်လို့ လက်မခံလို့ ပြန်လည်တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်နေတာလည်း မွတ်စလင်မ်တွေ အချင်းချင်းပဲ မဟုတ်လား ဗျာ …။
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်ပြောလိုတာကတော့ အစ္စလာမ်နဲ့ ဘယ်ဘာသာနဲ့မဆို အတူယှဉ်တွဲနေလို့သိပ်ကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခုကိုပဲ ကိုးကားပြပါ့မယ်။
“ နဂ်ျရာန် မှ ခရစ်ယာန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မဒီနာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည့်အခါ တမန်တော်မြတ်သည်ယင်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား မိမိကိုယ်တော်တိုင် ဧည့်ခံတော်မူ၏။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွင် တည်းခိုစေတော်မူ၏။ ထိုမျှမက ယင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား ဗလီတော်တွင် ၎င်းတို့ဘာသာအယူဝါဒ အလျောက် ကျင့်စဉ်များကို ၀တ်ပြုခွင့် ပေးခဲ့လေသည်။ ”
ဒါအပြင် အစ္စလာမ့်တိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၌ ရှိသော ဘာသာခြားများ၏ ၀တ်ကျောင်းများကို စောင့်ရှောက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အယူဝါဒ မတူသူများအား အစ္စလာမ်ဥပဒေဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း မပြုဘဲ သီးခြားဥပဒေ ပြဌာန်းပေးတော်မူခဲ့သည်။ …
ဒါတွေဟာ အကျဉ်းမျှ ထုတ်နှုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းအရကော လက်ရှိမြန်မာပြည်မွတ်စလင်မ်အများစုရဲ့ အကြောင်းကိုကော ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာလိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်တာကလွဲလို့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး ၊ ဒီမြေမှနေ၊ ဒီရေသောက်လာတာ မျိုးဆက် ၇ ဆက်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဒီနိုင်ငံကလွဲပြီး သစ္စာရှိစရာလည်း မရှိပါဘူး ။ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ ပဋိပက္ခ ကို ဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ် ။
မြန်မာပြည်သား မွတ်စလင်မ်များကတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး နဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိုသာ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်များကို လက်တွဲပူးပေါင်း ဆန့်ကျင်သွားမှာပါ။ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ အစ္စလာမ် တွေ အစွန်းရောက်မှု ရှိနေတာကို မငြင်းလိုပါ …။ အမေရိကန်တို့ အစ္စရေး တို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကို တုံ့ပြန်လာတဲ့ အချက်တခု အဖြစ်လည်း သုံးသပ်မိပါတယ် ။ လုံးဝ အမှန်တရားတခုလို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး…..။ အကြောင်းတရား တခုတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲပြောပြော အစ္စလာမ်တိုင်း အစွန်းရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုတော့ လူထုကို မြင်မသွားစေချင်ပါ။ ဟုတ်လည်း မဟုတ်ပါ။
ဒီစာကိုရေးမိခြင်းဟာ အစ္စလာမ် အပေါ်မှာ လူထု ပိုပြီး အမြင်စောင်းမသွားစေရန်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို လိုလားမှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းနဲ့ ပြသနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်တော့ ပြည်သူအားလုံးက လက်ကမ်းကြိုနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
ဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည်၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
By burmamuslim on August 24, 2014 | Leaveacomment
မြန်မာ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တတိယမြောက် သမီးဖြစ်ကာ သူမ၏ အမည်ပါ အောင်ဆန်းဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ ဖခင်အမည်ကို ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကြည်ဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အမည်မှ ရယူကာ စု ဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ အဖွားဖြစ်သူ၏ အမည်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှု အတွက် ဆာခါရော့ဗ်ဆု၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု နှင့် ရဖ်တို ဆုများ ရရှိခဲ့သည်။ အာဏာရှင် စနစ်အောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းသော၊ အကြမ်းမဖက်သော ကြိုးပမ်း အား ထုတ်မှု အတွက် အိန္ဒိယ အစိုးရက ချီးမြှင့်သော ဂျဝါဟာလာနေရူးဆုကိုလည်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေ ရဆဲ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင်တို့သည် သူမ၏ အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းအား အကြိမ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးလျက် ရှိသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အရ အနိုင်ရရှိခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် နေရာကို သူမ ရယူပိုင်ခွင့် ရှိသော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ အကျယ်ချုပ် ချထားခံရခြင်းကြောင့် ၄င်း ရာထုးနေရာအား သူမ ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
သူမသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသက် ၂နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်၊ သားကြီး အောင်ဆန်းဦး၊ သားလတ် အောင် ဆန်း လင်း၊ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အငယ်ဆုံး အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် တွေ့မြင်ရပုံ(လက်ဝဲ မှ လက်ယာ)မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း၏ သမီးဆိုသည့်အတိုင်း၊ ဒေါ်စု သည် မြန်မာပြည်ကို အမြဲတသွေ သတိရနေခဲ့သူ ဖြစ်သည် ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ခဏတာ နေထိုင်ခဲ့သောလည်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မကြာခင်တွင်၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခံခဲ့ရသည် ဒေါ်စုအား ပြန်လည်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသော အချိန်များတွင်လည်း အတားအစည်း အကျပ်အတည်းများရှိနေခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စုသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၊ စစ်အစိုးရမှ သူ့အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြန်လည်ချထားခဲ့သည်
မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော် အဆုံးအမများ၊ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ၏ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု အယူအဆများအတိုင်း အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် နိုင်ငံရေး လောက သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ခု စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ရေးတွင် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် နေ
အိမ်အ ကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူမအား နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာမည်ဆိုပါက အချုပ်အနှောင်မှ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမည်ဟု အစိုးရမှ ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း သူမက ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ တွင် စစ်အစိုးရမှ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ချိန်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အပြတ်အသက် အနိုင်ရခဲ့သည်။ အနိုင်ရရှိခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အမှန်ကို အသိအမှတ်မပြုပဲ စစ်အစိုးရမှ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ၏ နေအိမ်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားခဲ့သည်။ အကျယ်ချုပ်ချထားချိန်ကာလဖြစ်သည့် ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ဆာခါရော့ဗ်ဆု ဆု ရရှိခဲ့ပြီး၊ နောက်တစ်နှစ်တွင် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိခဲ့သည်။ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို သူမ၏ သားနှစ်ဦး ဖြစ်သည့် အလက်ဇန္ဒား (ခ) မြင့်ဆန်းအောင် နှင့် ကင်မ် (ခ) ထိန်လင်း တို့က သူ၏ ကိုယ်စား ရယူခဲ့ကြသည်။ သူ၏ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိသည့် ဆုကြေးဖြစ်သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းကို မြန် မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး မတည်ငွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်သော်လည်း၊ သူမ၏ မိသားစုရှိသည့် အင်္ဂလန် သို့ ပြန်သွားခဲ့ပါ က မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ဝင်ခွင့်မရမည်မှာ သေချာဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း အသိပေးခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရမှ အောင်းဆန်းစုကြည်အား ထပ်မံ၍ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တစ်နှစ်တိုးလိုက်သည်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အတည်ပြုပြောကြား သည်။ အနောက်နိုင်ငံများ နှင့် ကုလသမဂ္ဂမှ ဤလုပ်ရပ်များကို လက်ခံ နိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ် ဂမ်ဘာရီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာလိုက်နာစေရန် လေးရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဂမ်ဘာရီ ပြောဆိုချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သို့သော် သူမ၏ ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံလိုကြောင်း ဆန္ဒရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်သည် မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသို့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ စစ်အစိုးရ သည် ထောင်သား ၂၈၃၁ယောကို လွှတ်ပေးခဲ့ရာတွင်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄၀ ပါဝင်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူ၏ နိုဘယ်လ်ဆုကျေးများကို အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ပတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု၍ အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာမှ စွတ်စွဲလိုက်သည်။ ထိုစွတ်စွဲမှုသည် အမေရီးကားနိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ကျင်းပနေသည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သည် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေး ကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်နေသည် ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်စုကြည်သည် ၃နှစ် အတွင်း ပထမဦးဆုံး သူ၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများ နှင့် အစိုးရ ဝန်ကြီးများ အကြား တွေ့ ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ ဒုတိယအကြိမ် ခရီးအဆုံးနောက်၊ နာရီပိုင်းအကြာတွင် အာဏာပိုင်အစိုးရတို့သည် တီဗီ နှင့် ရေဒီယိုများတွင် ထိုတွေ့ဆုံခဲ့မှုကို တရားဝင် ထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ဖိတ်ကြားမှုများသည် မှန်ကန်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် မဲအနိုင်ရရှိခဲ့သောလည်း၊ ယနေ့တိုင် နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ရန် စစ်အစိုးရမှ ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
ရဲဘော်မိတ်ဆွေကြီး ကိုထွန်းဝေ ပြုစုထားသော အမေစု၏
သိရှိစေရန် မိတ်ဆွေကြီး ကိုထွန်းဝေ၏ တိုက်တွန်း ခွင့်ပြု မှု ဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
လိုအပ်နေသော အပိုင်းများကိုလည်းဖြည့်စွက် ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။
Credi- Tun Wai
အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အမေရိကန်ကော်မရှင် အဖွဲ့သည် ၂၁-၈-၂၀၁၄ ခု၊ ယနေ့ နံက်(၀၉း၀၀)နာရီတွင် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၌ သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား လာရောက်တွေ့ ဆုံသည့်ပွဲမှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်သည့် စကားများ